Danjire Yamamoto oo dhex dhexaadinaya DFS iyo Dowlad Goboleedyada
Home News Danjire Yamamoto oo dhex dhexaadinaya DFS iyo Dowlad Goboleedyada
Safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa wada dadaalo uu ku dhex dhexaadinayo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, si loo soo celiyo iskaashigii iyo wada shaqeyntii u dhaxeysay labada dhinac.
Donald Yamamoto ayaa shalay kulamo gaar gaar ah kula yeeshay magaalada Nairobi Madaxweynayaasha saddex ka mid ah shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda Federaalka, isagoo kala hadlay iskaashiga dowladda Federaalka iyo dowlad Federaalka oo muhiim u noqon doono sanadkan 2020 horumarka siyaasadeed iyo mustaqbalka Soomaaliya.
Yamamoto ayaa si kala gaar gaar ah ula kulmay Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Koofur Galbeed iyo Jubbaland, isagoo kala hadlay baahida degdegga ah ee loo baahan yahay si wada jir ah wax looga qabto caqabadaha jira, isla markaana wada hadalka ay lagama maarmaan u noqoto isu tanaasul dhinacyada oo dhan
“Mareykanka weli waxaa ka go’an oo go’aaminaya, xoogana saaraya sidii loo horumarin lahaa himilooyinkayaga iyo himilooyinka aan ka leenahay xaqiijinta Soomaaliya oo aamin ah oo barwaaqo ah dhammaan Soomaalida. Dadka Soomaaliyeed ayaa taas dalbanaya, jiilalka dambe ayaa filanaya, hoggaamiyeyaasha Soomaaliyana waa in ay fuliyaan”ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay Safiirka Mareykanka Donald Yamamoto.
Danjire Yamamoto kulankii uu la qaatay Hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa carabka ku adkeeyay baahida deg degga ah ee loo qabo dhammaan dhinacyada Jubooyinka iyo in la soo afjaro is mari waaga siyaasadeed iyo in diiradda la saaro la dagaalanka al-Shabaab.
Mr Yamamoto ayaa si gaar ah Axmed Madoobe kala hadlay hormarinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, xoojinta xiriirka dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo muhiimada ay leedahay in Soomaalida oo dhan ay iska kaashadaan hormarinta amniga, nabadda, iyo barwaaqada gobolka.
Sidoo kale waxaa uu la kulmay Madaxweynaha Puntland Saciid C /llaahi Deni oo ay ka wada hadleen taageerada Mareykanka ee Ciidamada Amniga Puntland, muhiimadda ay leedahay doorashooyin qaran oo loo dhan yahay, horumarka gobolka, iyo baahida degdegga ah ee iskaashiga iyo wadahadalka Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Dowladda Federaalka.
Kulamadan ayaa ahaa mid muhiimad gaar ah u lahaa Mareykanka, sidii dib loogu bilaabi lahaa Iskaashigii iyo wada shaqeyntii u dhaxeysay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Danjire Yamamoto ayaa la filayaa in dhowaan la kulmo Madaxweyne Farmaajo, kalana hadlo caqabadaha jira iyo sidii wada hadal lagu xalin lahaa, waxaana Mareykanka uu qorsheynayaa in dhowaan ka bilaabo Soomaaliya howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ay iska kaashadaan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada,